Joseph Weber na-akụzi na College of Journalism and Mass Communications na Mahadum Nebraska-Lincoln dị ka Jerry na Karla Huse Prọfesọ nke akụkọ akụkọ. O sonyeere kọleji na 2009 mgbe ọ rụsịrị ọrụ afọ iri ise na ise n'akụkọ, gụnyere afọ iri abụọ na abụọ na BusinessWeek magazine, nke ọ hapụrụ dị ka onye isi ndị nta akụkọ na onye isi ọfịs Chicago. Ọ kụzikwala ihe na Mahadum Tsinghua dị na Beijing yana Mahadum Ego na akụnụba nke Shanghai.
Weber bụ onye edemede Ntụgharị uche transcendental na America: ka otu ọgbọ ọhụrụ si emegharị na obere obodo na Iowa (Mahadum nke Iowa Press, 2014), Iguzosi ike n'ihe kewara ekewa: Ndị na -eto eto Somali America na oke oke oke (Michigan State University Press, 2020), na Rhymes na Onye Agha: Clayton Yeutter, American Statesman (Mahadum Nebraska Press, 2021).
Ọ bipụtala akwụkwọ n'ime Ihe ndị ruuru mmadụ na nkeji iri na ise, akwụkwọ akụkọ na onye nkuzi nkwukọrịta mgbasa ozi, nyocha Middle East na Ọmụmụ Utopian. Ọ bipụtakwara ọrụ n'ime Akwụkwọ akụkọ Washington Post, Miami Herald, Columbia Journalism Review na Akwụkwọ akụkọ mba.
O nwetara asambodo asambodo asusu bekee site na Rutgers College na nzere masta na nta akuko site na ulo akwukwo nzere nzere nke Mahadum Columbia.